Contact Point - Dagon Group
Contact Points for Enquiry
Human Rights, including Land, and Health, Safety and Environment (HSE)
ဒဂုန်ကုမ္ပဏီစု၏ဆုံးဖြတ်မှု၊လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာမေးမြန်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အီးမေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေမကြန့်ကြာစေဘဲဆက်သွယ်ကြစေလိုပါသည်။
Should you have any enquiry about any decision or move or activity of Dagon Group of Companies, please, do not hesitate to contact us via email or phone.
လူကြီးမင်းတို့ဆန္ဒရှိပါကတနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့အထိနံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅နာရီရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံပါရန် နွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့၏မေးမြန်းချက်များကိုနားထောင်မှတ်သားပြီးအဖြေအသင့်ရှိပါကချက်ချင်း ပြန်ကြားပေးပါမည်။မေးမြန်းချက်ကိုစိစစ်ရန်နှင့်အချက်အလက်များထပ်မံရှာဖွေရန် အချိန်လိုအပ်ပါက ဖြစ်နိုင်သမျှ အချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
If you think it desirable, we also warmly invite you to come and see the contact person during the office hour from9am to5pm, from Monday to Saturday. We will listen, take notes of your question and reply to you immediately if we have answer on hand. If we need more time to review the question and more facts to find, we will give the answer as soon as possible.
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အဓိ်ကသက်ဆိုင်သည့် မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကိစ္စများအပါအဝင်ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
• ဦးကျော်ဇောအောင် ၊ဒါရိုက်တာ၊ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်
• တယ်လီဖုန်းအမှတ် – ၅၀၃၈၇၆
• အီးမေးလိပ်စာ – [email protected]
• ရုံးလိပ်စာ-အမှတ် ၂၆၂-၂၆၄၊ပြည်လမ်း၊ဒဂုန်စင်တာ၊၆လွှာ၊မြေနီကုန်း၊ရန်ကုန်။
For the purposes of community issues including land and environment mainly concernedwith agriculture,the following contact point is available to discuss with you.
• U KyawZawAung, Director, Dagon International Limited
• Email.:[email protected]
• Address: 262-264,Pyay Road, Dagon Centre, Level 3,Myaynigone,Yangon
ဖောက်သည်များ ၊ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ ၊ ဒဂုန်ကုမ္ပဏီစုဝန်ထမ်းများသည် အကြံဉာဏ်နှင့်အကူအညီလိုအပ်ပါကအောက်ဖော်ပြပါဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
• ဒေါက်တာဒေါ်မိုးမြမြ၊ ဒါရိုက်တာ၊ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်။
• တယ်လီဖုန်းအမှတ် – ၅၀၃၈၇၃
• ရုံးလိပ်စာ – အမှတ် ၂၆၂-၂၆၄၊ပြည်လမ်း၊ဒဂုန်စင်တာ၊၃ လွှာ၊မြေနီကုန်း၊ရန်ကုန်။
The customers, business partners and employees of Dagon Group of Companies who are in need of advice and help are encouraged to approach the following contact point.
• Doctor Daw Moe MyaMya, Director, Dagon International Limited
• Address:262-264,Pyay Road, Dagon Centre, Level 3,Myaynigone,Yangon
လူကြီးမင်းတို့၏ မေးမြန်းမှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင် မှုကိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိ်ုင်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဟုသဘောထားပါသည်။
Thank you so much for your enquiry and we view it as an opportunity to improve our corporate services.
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန် ၂၄ ရက်